We Fight We Win. -- " More than Media ": ရန်ကုန် မြို့ ၄၈ လမ်း ပလီ မီးရှို့ ခံရ
ရန်ကုန် မြို့ ၄၈ လမ်း ပလီ မီးရှို့ ခံရ
ရန်ကုန်မြို့ ၄၈ လမ်း ဆွာဒီကီယာ အစ္စလာမ်ဘာသာရေး စာသင်ကျောင်း မီးရှို့ခံရပါတယ်။
မီးလောင်မှုကြောင့် ကလေး ၁၇ဦးသေဆုံးပါတယ်။ မီးသတ်က မီးငြိမ်းသတ်နေပုံ နှင့် ကယ်ဆယ်ရေး ဆောင်ရွက်နေသော ရပ်ကွက် အတွင်းရှိ ပြည်သူများ မှ ဒဏ်ရာ ရနေသော ခလေးငယ် များကို ရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ပုံ ဖြစ်ပါတယ်။ ဗလီမီးရှို့ခံရမှုက အကြမ်းဖက်သမားများ
ရန်ကုန် ကိုရောက်လာပြီးဖြစ်ကြောင်း မီးမောင်းထိုးပြနေပါတယ်။
Kalar Moe Thee is only problem maker...fuck man!!
Ha Ha. That's right.